लि’ङ्ग ठुलाे बनाउने घरेलु विधी: एक हप्ता मै यसरि हुन्छ ठुलो – Ujyaalo Patrika
लि’ङ्ग ठुलाे बनाउने घरेलु विधी: एक हप्ता मै यसरि हुन्छ ठुलो
लि*ङ्ग बढाउने उपायलाई मोटामोटी रूपमा ४ प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ।
कसरत तथा हातैले तन्काउने विधि
दैनिक रूपमा पर्याप्त समय लि*ङ्ग दोहन दुहुने जस्तो गरी तन्काइए लि*ङ्गको नाप बढ्ने दाबी गरिएको छ। यसरी हातैले तन्काउने विधि अरेबियाका भनिने चलनवाट आएको दाबी गरिन्छ। यस्तो लि*ङ्ग दोहनको विधिले भित्री तन्तुलाई फुक्न मद्दत गर्छ र लि*ङ्ग राम्रोसँग उ*त्ते*जित हुने दाबी गरिन्छ। यसै भन्न नसकिए पनि रक्तसञ्चारलाई राम्रो बनाइ यसले लि*ङ्गको स्वस्थतालाई यथास्थितिमा राख्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गर्छन्। यो विधि अपनाउँदा अत्यधिक दबाबका साथ तानिए तन्तुलाई चोट पुग्ने कुरामा पनि सचेत हुन आवश्यक हुन्छ।
तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि
कुनै वजनदार वस्तु लि*ङ्गमा झुन्डयाई वा भएका यन्त्रले लि*ङ्गको नाप बढाउने विधि हो। कतिपयले यस्ता विधिले अनावश्यक रूपमा लि*ङ्गमा चोटपुग्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। लि*ङ्ग पुरुष को ठुलो पार्न तन्काउने ,दुहुने र कम्प्रेसन प्रक्रिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने कडा र घन्टौ से*क्स गर्न केगल ब्यायाम तौल र बिना तौल तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ । तौल को लागि उत्तेजित लि*ङ्गमा रुमाल प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ बिस्तार रुमाल भिजौदै तौल बढाउन सक्नु हुन्छ ।
पम्प प्रयोग गर्ने विधि
दबाब कम गर्ने पम्प प्रयोग गरी लि*ङ्गमा रक्त प्रवाह बढाउने यो विधिले अन्य समयमा भन्दा लि*ङ्गको उत्तेजना कडा र बढी हुने दाबी गरिएको छ। यसलाई लिङ्गको फेदमा लगाएपछि हाते वा विद्युतीय भ्याकुम पम्पले हावा निकालिन्छ र कम दवाव भएको कारणले लि*ङ्गमा बढी रक्त प्रवाह हुन्छ र लि*ङ्ग बढी उ*त्ते*जित भएजस्तो देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका वारेमा त प्रश्न छँदैछ, ठीकसँग प्रयोग गर्न नजाने लिङ्गमा चोट पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
लि*ङ्ग बढाउन विभिन्न किसिमको शल्यचिकित्सा पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ। त्यस्तो विधिमा लि*ङ्गलाई अडयाउने तन्तु का*ट्ने एउटा तरिका हो जसले गर्दा वाहिरवाट हेर्दा लि*ङ्ग केही लामो भएको भान पर्छ। आफ्नै शरीरको अन्य भागवाट निकालिएको वोसो तन्तु भर्ने विधिले विशेषगरेर लि*ङ्गको मोटाइ बढाउन मद्दत गर्छ। छालालाई नै नचबात गर्ने पद्धतीको पनि विकास भएको छ। त्यसबाहेक लि*ङ्गमा अन्य वस्तु राख्ने प्रत्यारोपण जस्ता अनेक उपायको प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ।
यस्तो शल्यक्रिया कुशल शल्य चिकित्सकवाट गरिनु आवश्यक छ। यसका बाबजुद कतिपय स्थितिमा शल्यक्रिया पछि आशाअनुरूप नतिजा नआएको पनि देखिन्छ, जसले असन्तोषलाई अझ थप्छ। कतिले शल्यक्रियाको जटिलतालाई सामना गर्नु परेको छ जसले उसलाई पुरानैभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा पुर्‍याएको छ।
कतिले उ*त्ते*जना नभएको लि*ङ्गको आकारमा सुधार भएको पाए पनि उ*त्ते*जित लि*ङ्गको आकारमा सुधार नभएको वा यौ*न सुखमा सकारात्मक परिवर्तन नआएको कुरा पनि गरेका छन्। लि*ङ्ग केही सानै भए पनि आफूले यौ*न सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भने महिलासाथीलाई दिन पनि सकिन्छ। तपाईलाई थाहै होला, महिलाको सबैभन्दा यौ*न सं*वे*दनशील अ*ङ्ग अर्थात् भ*गां*कुर बाहिरतिर नै हुन्छ। यो*निको कुरा गर्दा पनि भित्रतिरको नभै बाहिरतिरको भाग यौ*न संवेदनशील हुन्छ। एजेन्सी
Previous के ‘लिं’,गको आकारले महिलाको ‘याै’, न स’न्तुष्टिमा फरक पार्छ ?
Next साबधान : यी खानेकुरा झुक्किएर पनि मिसाएर नखानुस -ज्यान जान सक्छ ।
कोरोना भाइसविरुद्धको खोप बनाउन कोरोना भाइरसकै प्रयाेग, कसरी काम गर्छ ?
नेपाल भित्रिएको ३ लाख डोज खोप कहा हरायो ?